ပိတ်ထားသောသတင်းမော်ကွန်းတိုက်•လူးစီယာယာနာ၏ ၄၂၀၀ ပိတ်ပင်တားဆီးမှု
ကျန်တဲ့“ Block Organizinging - MizEducation Podcast မှ Tasha နှင့် Staci တို့နှင့်စကားစမြည်ပြောခြင်း” အပိုင်းကိုဖတ်ပါ။
အောက်မှာ Filed သတင်းပိတ်ဆို့မှု . အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ . သတင်းပိတ်ဆို့မှု. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ .
ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် မတ်လ 6th, 2021 .
ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါ -“ Louisiana Block 4200 မှကြိုဆိုပါတယ်!”
ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် စက်တင်ဘာလ 8th, 2020 .
4200 Louisiana သတင်းပိတ်ဆို့မှု